अन्तर्राष्ट्रिय खबर – Page 10 – shubhabihani
Home / अन्तर्राष्ट्रिय खबर (page 10)	अन्तर्राष्ट्रिय खबर	विश्वको सबैभन्दा ठूलो विमान क्र्यासल्यान्ड गर्दा दुर्घटना
356 Views काठमाडौं—विश्वको सबैभन्दा ठूलो विमान क्र्यासल्यान्डिङ गर्ने क्रममा दुर्घटनामा परी क्षतिग्रस्त भएको छ। दोस्रो टेस्ट फ्लाइटका क्रममा सो दुर्घटना भएको हो। विमान सञ्चालकका अनुसार दुर्घटनामा कोही घाइते भएका छैनन्।
उडिरहेका बेला समस्या आएपछि इङ्ल्यान्डको क्र्याडिङटन विमानस्थलमा विमानलाई क्रसल्यान्डिङ प्रयास गरिएको थियो। ‘क्र्यासल्यान्डिङ गर्ने क्रममा एयरल्यान्डर क्षतिग्रस्त भएको छ’, विमान निर्माता हाइबर्ड एयर भेइकल्स (एचएभी) ले भनेको छ, ‘चालक दलका सबै सुरक्षित छन्। कोही घाइते भएका छैनन्।’
विमानको ककपिटमा क्षति पुगेको छ। जहाजले टेलिग्राफको खम्बामा ठोक्किर दिँदा अग्रभागमा क्षति पुगेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्।
यो जहाज सुरुमा अमेरिकाले मिटरिङ गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरेको थियो। एचएभीले यसलाई मनिटिरिङ, सञ्चार तथा यात्रु बोक्ने विमानको रुपमा विकास गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। २०२१ सम्ममा यसको व्यवसायिक उडान गर्ने कम्पनीको तयारी छ।
९२ मिटर लामो एयरलाइन्डर १० सो विमान हेलिकोप्टर र एयरसीप प्रविधिको मिश्रण हो।
भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजले जब नेपालको उदाहरण दिइन्
1,175 Views काठमाडौं— भारतीय संस्थापन पक्षका भनाइहरु नेपालीका लागि सधैँ चासोको विषय हुने गरेका छन्। पाँच महिना लामो नाकाबन्दीपछि दक्षिणी छिमेकीको छवि नेपालीबीच आलोचनाको विषय बनिरहँदा त्यो चासो अझ बढेको छ।
कोख भाडामा लगाउने आमाको व्यापक शोषण भएको भन्दै नेपाल, थाइल्यान्डले पनि व्यापारिक सरोगेसीमाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन्
तर बिहीबार भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले नेपाललाई एउटा सकारात्मक उदाहरणको रुपमा पेश गरिन्। नेपाली राजनीतिकलाई आफ्नो पकडमा राख्न चाहने विदेश मन्त्रालयकी प्रमुखले भारत सरकारको सामाजिक नीतिको बचाऊका लागि नेपालको उदाहरण दिएकी हुन्।
भारत सरकारले गरेको कोख भाडामा लगाउने कार्य (सरोगेसी) माथि प्रतिबन्ध लगाउने कार्यको बचाऊ गर्दै उनले भनिन्, ‘कोख भाडामा लगाउने आमाको व्यापक शोषण भएको भन्दै नेपाल, थाइल्यान्डले पनि व्यापारिक सरोगेसीमाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन्’, उनले ट्विट गर्दै भनेकी छन्।
व्यापारिक सरोगेसीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि सो विषय विश्वभरि चर्चामा छ। वैधानिक रुपमा विवाह गरेका भारतीय दम्पत्तीबाट पाँच वर्षसम्म बच्चा नभएमा भने सरोगेसी बच्चा पाउने छुट दिने नीतिले भारतभरि ठूलो चर्चा पाएको छ।
नेपालमा एक वर्षअघि नै सरोगेसी प्रतिबन्ध गरिसकेको छ। नेपालमा कोख भाडामा लगाउने अधिकांश महिला पनि भारतीय नागरिक थिए। गरिब महिलाको शोषण भएको भएको भन्दै सरकारले सरोगेसी प्रतिबन्ध गरेको थियो।
कोरियामा संयुक्त सैन्य अभ्यास
108 Views भाद्र ७, २०७३- दक्षिण कोरिया र संयुक्त राज्य अमेरिकाको संयुक्त सैन्यले दक्षिण कोरियामा अभ्यास सुरु गरेको छ । दुवै देशले अत्याधुनिक प्रविधि र हतियारका साथ सोमबारदेखि दक्षिण कोरियामा सुरु गरेको सैन्य अभ्यासले छिमेकी देश उत्तर कोरियालाई भने निकै क्रुद्ध बनाएको छ ।
उसले यो सैन्य अभ्यासलाई अपवित्र र गर्न नहुने कामका रूपमा अर्थ्याउँदै युद्ध उन्माद बढाउने काम गरेको भनेर भत्र्सना पनि गरेको छ । उत्तर कोरियाले संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन पनि भनेको छ ।
‘यो उत्तर कोरियाको सार्वभौमसत्तामाथिको हमला हो,’ उत्तर कोरियाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यदि यस्तै अवस्था कायम रह्यो भने हामी पनि जस्तोसुकै सैन्य कारबाहीका लागि तयार छौं ।’
यस सैन्य अभ्यासका क्रममा दक्षिण कोरिया र अमेरिकाको सेनाले उत्तर कोरियाको जल, स्थल वा आकाशमा छुनेमात्र प्रयास गर्‍यो भने पनि आफूले नसहने र त्यसको प्रतिकारात्मक कारबाही गर्ने उसले जनाएको छ ।
दक्षिण कोरिया, संयुक्तराज्य अमेरिका तथा संयुक्त राष्ट्रसंघले बारम्बार आग्रह गर्दा पनि उत्तर कोरियाले आणविक परीक्षण रोकेको छैन । यसलाई विश्व समुदायले उत्तरको हठी स्वाभाव भएको बताउने गरेका छन् ।
त्यसको विपरीत अमेरिकाले भने यस सैन्य अभ्यास कोरियाली प्रायद्वीपमा शान्तिका लागि भएको दाबी गरेको छ । त्यस क्षेत्रमा देखिएको अस्थिरता नियन्त्रण गरी दक्षिण कोरिया र अमेरिकाबीच सम्बन्ध विस्तारका लागि यो अभ्यास महत्त्वपूर्ण भएको पनि दुवै देशका सैन्य अधिकारीले बताएका छन् । अभ्यासमा अमेरिकाका २५ हजार सेना छन् भने कोरियाका ५० हजार ।
उत्तर कोरियाले हालैका दिनमा जारी राखेको आणविक परीक्षणका कारण उत्तर कोरिया र दक्षिणबीच व्यापक विवाद जारी रहेको बेला यो अभ्यास सुरु भएको हो । कम्प्युटरकृत तथा अन्य अत्याधुनिक माध्यमहरूको प्रयोगमार्फत् गरिने यस सैन्य अभ्यास सेप्टेम्बर २ सम्म नै सञ्चालन हुनेछ ।
उत्तर कोरियाले गत महिना समुद्री तटीय क्षेत्रलाई केन्द्र बनाएर क्षेप्यास्त्र छोडेको थियो ।
गएको करिब वर्ष दिनसम्म नै उत्तरका क्रियाकलापहरू निकै बढ्दो रूपमा देखिएकाले फेरि पनि अर्को परीक्षणको तयारी भएको समाचार विवरणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । उत्तर कोरियाले गतवर्षदेखि सुरु गरेको यो पछिल्लो आणविक परीक्षणको शृंखला अझै रोकिएको छैन । यस्तो शृंखलाका कारण पछिल्ला दिनहरूमा संयुक्त राष्ट्रसंघ, अमेरिका र दक्षिण कोरियालाई पनि झस्काएको छ ।
दुई कोरियाबीचको सम्बन्ध पछिल्लो समयमा निकै चिसिएको छ । उत्तर कोरियाको यो परीक्षण विरुद्धमा दक्षिण कोरिया र संयुक्तराज्य अमेरिकाले प्रतिरक्षात्मक प्रणाली जडान गरेका छन् ।
त्यसैले उत्तर कोरियाले यो सैन्य अभ्यासको निकै कडा शब्दमा विरोध गरेको हो । उत्तरले त्यस्तो प्रणाली दक्षिण कोरिया र अमेरिका मिलेर जडान गरेकोले आफूले त्यस प्रणालीलाई भौतिक कारबाही
गर्नेसमेत जनाएको छ ।
जापानमा ६ म्याग्निच्युडको भूकम्पको धक्का महसुुस
193 Views ४ भदौ, टोकियो (जापान)।
जापानको उत्तरपश्चिम सामुद्रीक इलाकामा शनिबार ६.० म्याग्निच्युडको भूकम्पीय धक्का महसुस गरिएको जापानको मेटेरियोलोजिकल एजेन्सीले बताएको छ ।
स्थानीय समयअनुसार ६ बजेर १ मिनेटको समयमा उत्तरपश्चिम जिल्ला मियागीमा केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पबाट क्षति भएका खवर प्राप्त भै नसकेका स्थानीय सञ्चार माध्ययमले बताएका छन् ।
भूकम्पको केन्द्रबिन्दु ४०.३ डिग्री उत्तरी अक्षांश र १४३.९ डिग्री पूर्वी देशान्तरमा १० किलोमिटर गहिराईमा रहेको बताइएको छ ।
जापानको होकाइदो, मियागो, अकिता र यमगाटा क्षेत्रमा भूकम्पपीय धक्का महसुस भएपछि घर र अफिसभित्र काम गरिरहेका मानिसबीच केहीबेर भागदौड मच्चिएको थियो ।
भूकम्पपछि सुनामी आउने सम्भावनाबारे जापानी मौसम विभाग तथा सरकारले कुनै चेतावनी भने दिएको छैन ।
तालिवानद्वारा अफगानिस्तानको एक दक्षिणी जिल्ला कब्जा
174 Views कुन्दुज। अफगानिस्तानमा करिब डेढ दशकदेखि हत्या हिंसा चलाइरहेका तालिवानहरुले अफगानिस्तानको उत्तरतर्फको एक जिल्ला कब्जा गरेको समाचार छ । उनीहरुले अफगानिस्तानको उत्तरी प्रान्त कुन्दुज प्रान्तको नजिक रहेको खान अबाद जिल्लालाई शनिबार कब्जा गरेका बताइएको छ । त्यसअघि सो जिल्लामा गएको रातिदेखि नै व्यापक मात्रामा भिडन्त भएको थियो ।
उक्त जिल्लाका कार्यकारी अधिकारी क्वादरतुल्लाह साफीले सो जिल्लामा तालिवानहरुको आक्रमण निरन्त रहेको र सो अवसरमा केही प्रहरी र तालिवान आतङ्ककारी पनि मारिएका बताएका छन् । उनकाअनुसार शनिबार बिहानैदेखि बजारदेखि कैयौं क्षेत्रमा दर्जनौँको सङ्ख्यामा रहेका तालिवानहरुले कब्जा जमाएका थिए । उनीहरुले बजार इलाकालाई कब्जा जमाएका बताइएको छ ।
उक्त जिल्ला प्रान्तीय सदरमुकाम कुन्दुज सहरबाट २५ किलोमीटर पूर्वमा पर्दछ । तखार र कुन्दुज प्रान्तलाई जोड्ने यो प्रमुख सहर हो । त्यसैले यसलाई एक सामरिक महत्वको जिल्लाकारुपमा पनि लिइएको थियो । उक्त जिल्ला कब्जागर्ने रणनीतिस्वरुप उनीहरुले बिगत लामो समयदेखि सुरक्षा निकायसँग भिडन्त गर्दै आएका थिए । सो भिडन्तका क्रममा यसअघि पनि कैयौँको ज्यान गएको छ ।
एउटा खाडलः जहाँबाट वर्षेनी निस्किन्छ २ खर्व ८० करोडको हिरा
810 Views एजेन्सी ।
वर्षाको समयमा सडकमा खाडल पर्‍यो भने सबैलाई सरकारको आलोचना गर्छन् । त्यसमाथि पनि शहरमा यस्ता खाडल भएमा त सरकारको धज्जी उडाइन्छ ।
तर तपाइँलाई पत्यार नलाग्न सक्छ शहरमै रहेका कतिपय खाडल भने भयंकर मूल्यवान पनि हुन सक्छन् ।
हो यस्तै उदाहरण खाडल छ पूर्वी साइवेरियामा । हिराको शहर भनिने ‘मिर माइन’ मा रहेको यस्तो खाडल यति मूल्यबान छ कि यसको सुरक्षाका लागि हजारौं सैनिक तैनाथ छन् । यहाँ हेलिकोप्टरले सुरक्षा गस्ती गरिरहन्छन् ।
तर यो खाडल भित्र हेलिकोप्टर पनि खस्ने गरेको भन्दै केही टाढाको दुरीबाट मात्र उडाउने गरिएको छ ।
यो बहुमूल्य खाडल १७२२ फिट गहिरो छ भने एक माइल ब्यास छ । खुला हिरा खानीकोरुपमा रहेको भएपनि सन् २००४ देखि यहाँ माथिबाट हिरा खोज्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।
सन् २०१४ मा ६ मिलियन क्यारेट रफ हिरा भेटिएको यो खानीबाट एक वर्षमा करिव २ लाख क्यारेट हिरा निक्लिन्छ । यसको मूल्य २ करोड पाउण्ड अर्थात २ खर्व भन्दा बढी पैसा मूल्य हुन आउँछ ।
यो हिरा खानीको मालिक रुसी कम्पनी अलरोसा हो । यो कम्पनीले संसारभरिमा उत्पादन हुने मध्ये १ चौथाइ हिरा उत्पादन गर्छ ।
उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियाकी राष्ट्रपतिलाई किन भन्यो मनरोगी ?
197 Views उत्तर कोरियाले मिसाइलको विवादको सिलसिलामा दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपति पार्क जेयुन हेलाई मनरोगी भनेको छ ।
खासगरी दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति पार्कले उत्तर कोरिया विरुद्ध दक्षिण कोरियामा अमेरिकी शक्तिशाली मिसाइलको समर्थन गरेपछि प्योंगयांगले मनरोगी भएको अभिव्यक्ति दिएको हो ।
पार्कले टेलिभिजनमा हालै सोमबारको प्रसारित एक बयानमा जोड दिएका थिए कि टर्मिनल हाई एल्टिच्युड एरिया डिफेन्स (टिएचएएडी) प्रणालीको तैनाथी उत्तर कोरियाको परमाणु हतियार कार्यक्रमको प्रसारको जबाफमा उठाउने आत्मरक्षाको कदम हो ।
उत्तर कोरियाको कमिटी फर पुपुल्स रियुनफिकेसन अफ द कन्ट्रीको प्रवक्ताले पार्कको यस्तो तर्क निरर्थक र निराधार थियो भनेका छन् ।
प्रवक्ताले भने – ‘यो एउटा बेकारको बहाना हो र उनलाई जानकारी हुनुपर्छ कि यस्तो कठपुतलीको कुतर्कमाथि कसैको विश्वास हुँदैन भनेर । जो अमेरिकाको मन्जुरीबिना केही पनि गर्न सक्दैन ।’
उत्तर कोरियाको आधारिक समाचार एजेन्सी केसिएनएद्धारा दिएको बयानअनुसार उनले भने – ‘यो अरु केही पनि हैन बस् एउटा मनोरोगीद्धारा गरिएको बकबास हो ।’
नौ लाख लिटर तेल बोकेको पानीजहाज अपहरणमा
250 Views क्वालालम्पुर : भारी मात्रामा तेल भएको ट्याङ्कर बोकेको एक मलेसियाली पानीजहाज मङ्गलबार अपहरणमा परेको छ ।
करिब नौ लाख लिटर डिजेल भएको ट्याङ्कर बोकेको मलेसियाली सो पानीजहाज इन्डोनेसियाली जलक्षेत्रतर्फ लगिएको मलेसियाली सामुद्रिक अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।
दक्षिणी मलेसियाको तान्जुङ पल्पास बन्दरगाहबाट मङ्गलबार नौ लाख लिटर डिजेल भरेको तेल ट्याङ्कर लिएर आएको उक्त पानीजहाज बेपत्ता भएको सामुद्रिक निकायले जानकारी दिएका थिए ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सो पानीजहाज अपहरण भएको हुनुपर्ने मलेसियाली सामुद्रिक निकायका प्रमुख अहमतपुजी कहारले बुधबार बताएका छन्। कहारका अनुसार सो विमान इन्डोनेसियाको बटम द्वीपतर्फ लगेको हुनुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक निकायको क्वालालम्पुरका प्रमुख नोएल चोओगले सो तेल ट्याङ्कर बेपत्ता भएको पुष्टि गरेका छन् ।
हाल सो ट्याङ्कर कहाँ छ भन्ने विषयमा सूचना प्राप्त भइनसकेको चोओगले एएफपी समाचार समितिलाई बताएका छन् । रासस/एएफपी
पाकिस्तानमा हस्तक्षेप गर्न मोदीलाई आग्रह
467 Views पाकिस्तानः पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरको गिलगिट बाल्टिस्तानमा स्थानीय बासिन्दाले पाकिस्तानी सेनाको विरोधमा प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरूले पाकिस्तानका विरोधमा विशाल नारा जुलुस पनि गरेका छन् ।
प्रदर्शनका क्रममा ५ सय युवालाई हिरासतमा लिइएको छ । पक्राउ परेकामा अधिकारवादी बाबा जान पनि छन् । आक्रोशित भीडले पाकिस्तान प्रशासित क्षेत्रबाट पाकिस्तानी सेना फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।
केही दिनअघि एसियन ह्युमन राइट कमिसनले आफ्नो एक बयानमा गिलगिट बालिस्तानमा पाकिस्तानी प्रहरीले अत्याचार गरेको भन्दै विरोध प्रकट गरेको थियो । त्यस क्षेत्रमा थप सुरक्षाकर्मी राख्दा शान्त इलाकामा झनै अशान्ति बढेको उसको दाबी थियो । त्यस क्षेत्रमा प्रहरीले अवाञ्छित गतिविधि गर्ने गरेको त्यस संस्थाको भनाइ थियो ।
शुक्रबार भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जम्मु कश्मीर, लद्दाख र पाकिस्तान प्रशासित क्षेत्र भारतको भूभाग भएको बताएका थिए । पाकिस्तानले पनि भारत प्रशासित कश्मीरमा सरकारले अत्याचार गरेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघलाई हस्तक्षेप गर्न आह्वान गरेको थियो । भारत प्रशासित कश्मीरका जनतामाथि अत्याचार भएको भन्दै पाकिस्तानले विरोध गरेको थियो ।
प्रदर्शनकारीले गिलगिटका अस्तोर, दियामिर र हुनजामा विशाल प्रदर्शन गरेका थिए । यी क्षेत्रमा सियाको घना बसोवास छ । पाकिस्तानमा सुन्नी मुस्लिमको वर्चस्व रहेको छ ।
मोदीसँग सहयोग माग्दै पाकिस्तानी
पाकिस्तानको बलुचिस्तानका जनताले आफ्नो मानवअधिकार उल्लंघन हुने गरेको भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सहयोग माग गरेका छन्। उनीहरूले बलुचिस्तानका जनतामाथि हुने अत्याचारको मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघमा उठाइदिन आग्रह गरेका छन् ।
बलुच कार्यकर्ता नायला बलुचले भने, ‘बलुचिस्‍तानका बासिन्दा पीडित भएका छन् । नरेन्द्र मोदीले आगामी सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा हाम्रो आवाज उठाउनु पर्छ ।’ बलुचिस्‍तान, बल्तिस्‍तान र पाकिस्‍तान प्रशासित कश्‍मीरका जनताको आवाज राष्ट्रसंघमा उठाइदिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
यसैगरी बलुच कार्यकर्ता हमाल हैदर बलुचले भने, ‘हामी धर्म निरपेक्षता र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विश्वास गर्छौं ।’ पाकिस्तानले बलुचको हत्या गर्ने गरेको उनले बताए ।
साउदी दुई शहरमा निशाना बनाएर हानियो मिसाइल !
3,072 Views २८ साउन, काठमाडौं ।
यमनबाट साउदी अरेवियाका दुई शहरमा प्रहार गरिएका दुई ब्यालेस्टिक मिसाइललाई इन्टरसेप्ट गरिएको साउदी सेनाले जानकारी दिएको छ ।
साउदी सेनाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मिसाइल अवतरण हुन नदिइएको जानकारी गराएको हो ।
साउदी सेनाका अनुसार बुधबार दिउसो यमन पट्टीबाट अरबको आभा र खामिस मुतैश नामक शहरलाई लक्षित गरेर मिसाइल प्रहार गरिएको थियो ।
यो मिसाइल अवतरण गर्न नपाएका कारण कुनै दुख्द घटना नभएको समाचारमा जनाएको छ ।
यमनमा हाउथी नामको शिया विद्रोही लडाकु समूह सक्रिय छ । यी विद्रोहीसँग सोभियत कालका स्कड मिसाइल रहेको छ । यमनको सेनाबाट विद्रोहीहरुले यी मिसाइल लिएका थिए ।
साउदी नेतृत्वको गठबन्धन सेनाले हाउथी विद्रोही विरुद्ध युद्ध जारी राखेको छ । साउदीले अन्तराष्ट्रिय समर्थन प्राप्त गर्नका लागि संघर्ष गरिरहेको छ ।
यमनमा शान्ति वार्ता असफल भएपछि मंगलबारदेखि साउदी सेनाले हवाइ आक्रमण शुरु गरेको थियो । यसकै विरोधमा हाउथी विद्रोहीहरुले साउदीमा मसाइल हानेका हुन् ।
Page 10 of 23« First...«89101112	»	20...Last »	Recent Posts